Sales Coordinator Archives - Glory Assumption Space
Sales Coordinator (Sales & Marketing) – Female – (5) Posts /လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၁) Sales Coordinator (Sales & Marketing) – Female – (5) Posts /လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် /ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်။ Qualifications Requirement • Experience asaSales Coordinator or in administration may be advantage. • Computer Literacy (Myanmar and English) • Customer Focus • Excellent negotiating and communication skills • Ability to co-ordinate with others Education & Special Training • Bachelor Degree in Business Administration or related field or any Bachelor Degree Experiences •3year or more experience in Sales • Can Speak in English Job purpose The Sales Coordinator’s responsibilities include supporting sales, ensuring order satisfaction, coordinating with other department’s motivation staff handling administrative duties and promoting customer satisfaction. Duties and Responsibilities Job Responsibilities • Helping the sales team to improve their productivity by contacting customer to arrange appointments. • Keep update customer data base, sales call record, appointment record and quotation record • Check and update Sample Article Inventory, Stock Inventory and Catalogue List as daily, weekly, monthly • Prepare and share follow up customer list to carry on and upcoming projects. • Prepare require documents and sample board for potential customers. • Prepare and check the documents such as Quotation, Sales Order, Invoice, DO, MIR and references articles for customers. • Prepare Material Requisition for the require sample articles and other items when stock run out. • Report promotion article and prepare price list to Manager • Prepare email letter formats of request appointment, greeting and thank you to customers • Handling orders by phone, email, or mail and checking the orders have the correct prices, discounts and product number. • Developing and maintaining filing systems so as to maintain sales records, prepare reports and provide financial information to the finance department. • Cooperate with Manager to do the marketing tools_ Pamphlet, Company profile, product presentation, sample catalogue books. • Update sales call record, appointment record and quotation record • Arrange and fulfill stationary and other requirements form SMD GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် တွင်ရှိသော နိုင်ငံခြားဖက်စပ် သစ်လုပ်ငန်းနှင့်အဆောက်အဦးအဌား များပြုလုပ်သည့် ကုမ္ပဏီကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါ ၀န်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါ ရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Coordinator (Project Sales) – Male (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)
အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည်။ 1.	Sales Coordinator (Project Sales) – Male (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ။ •	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ •	အသက် ၂၀ - ၃၅ နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ •	Marketing & B2B Sales လုပ်ငန်းတွင် အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၃)နှစ်ရှိရမည်။ •	လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေကို နားလည်သူဖြစ်ရမည်။ •	Computer အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ ( Microsoft Office, Internet) •	ဆိုင်ကယ် စီးတတ်ရမည်။ ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်ရှိရမည်။ •	လိုအပ်ပါက နယ်ခရီးထွက်နိုင်ရမည်။ •	အလုပ်ချိန် (8:30 AM – 4:30 PM) •	ယူနီဖောင်းရှိသည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းသည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်ရှိ Painting Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ ) [caption id="attachment_5328" align="alignnone" width="300"] Wooden staircase to reach goal and win trophy with increase graph and arrow, successful[/caption]
Sales Coordinator ( Project Sales ) – Male (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်ရှိ Painting Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ အင်တာဗျူး ချက်ချင်းဝင်ရမည်။ 1.	Sales Coordinator ( Project Sales ) – Male (5) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်) / မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် ။ •	ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ •	အသက် (၂၁ - ၂၇)နှစ် အတွင်းဖြစ်ရမည်။ •	Marketing & Sales လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိရမည်။ •	Construction Site များသို့သွားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Computer အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ( Microsoft Office ) •	ကားမောင်းလိုင်စင်ရှိရမည်။ •	မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် (စက်ဆန်း) နှင့် နီးစပ်သူဦးစားပေးမည်။ •	အလုပ်ချိန် (8:30 – 4:30 ) •	ဖယ်ရီရှိသည်။ ယူနီဖောင်းရှိသည်။ •	တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No – 09 263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09 263121101 , 09262223784 , 09977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales Coordinator – Female (5)Posts / လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)/ လှိုင်သာယာမြို့နယ်
မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ Painting Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ Sales Coordinator – Female (5)Posts / လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)/ လှိုင်သာယာမြို့နယ် •	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ •	ဖုန်းနှင့် order ကောက်ပြီးစာရင်းများသွင်းပေးနိုင်ရမည်။ •	Customer Complain များကိုဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံမရှိသူများလည်း လျှောက်ထားနိုင်သည်။ •	သွက်သွက်လက်လက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ •	အိမ်ထောင်မရှိသောသူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်းမှတ်တိုင်(အင်းစိန်လမ်းမကြီး) ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales Coordinator (Project Sales) - Male / Female (7) Posts
************** URGENT REQUIREMENT *************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Urgent Post 1. Sales Coordinator(Project Sales) - Male/Female (7) Posts / Salary 150000 Kyats / Mingalar Taung Nyunt Township Requirements - Any Graduate. - အသက်(၂၁)နှစ် မှ (၂၆) နှစ်အတွင်းရှိ သူဖြစ်ရမည်။ - Marketing & Sales လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရမည်။ - Construction Site များသို့သွားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - Computer ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။(Microsoft Office) - မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တွင်အလုပ်ဆင်းရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr4@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, Phone No – 09-263256668,09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Sales Coordinate - Male/Female (5) Posts
********************** URGENT REQUIREMENT ************************* မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Construction Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ Sales Coordinate- Male/Female(5)Posts/Salary-200,000Kyats/Mingalar Taung Nyunt Township. -ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ -Computer ကျွမ်းကျင်စွာသုံးနိုင်ရမည်။ -လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ့ (၁)နှစ်ရှိရမည်။ -ဖယ်ရီရှိသည်။နေ့လယ်စာကျွေးပါသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Sales Coordinator - M/F (5)Posts
******************** URGENT REQUIREMENT ******************* ချက်ချင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ Sales Coordinator – M/F (5)Posts/Salary – 180000 Kyats/ Mingalar Taung Nyunt Township - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - Computer Basic ရရမည်။ - အသက် ၂၀ နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်ရှိရမည်။ Emailဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက် ထား နိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com , gasrecruit.hr1@gmail.com , gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Sales Coordinator (Project Sales)-Female(5)Posts
မင်္ဂလာပါရှင့်။အိမ်သုတ်ဆေးကုမ္ပဏီကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Sales Coordinator (Project Sales)-Female(5)Posts/ Salary -150000 Kyats/Pazundaung Township • Any Graduate • အသက် ၂၁-၂၆ နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရမည်။ • Construction Site များသို့ သွားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • Computer အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ • ပုဇွန်တောင် (စက်ဆန်း)တွင် အလုပ်ဆင်းရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales Coordinator - Female (5) posts
Any Graduate အသက် ၂၁ မှ ၃၀နှစ် အတွင်းဖြစ်ရမည်။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁နှစ် ရှိရမည်။ Computer Basic သုံးနိုင်ရမည်။